Buy Toyota Kluger 2007 (440Lks) in တာမွေ on ipivi.com
ရောင်းချသူ: Odfjell Seven
2007 model / 2.4 2w7seaters . ACU20- 0169 . japan original skirt . license until april 2020. driver seat motor .no accident . price is negotiable . 440 Lပိုင်ရှင်ကိုယ်တိုင် ရောင်းမည် 09 9600 10 420**** CarsDBတွင်ကြော်ငြာတင်ထားသောကားဟုပြောကာ ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါသည်။****
အမည်: Toyota Kluger 2007